Qaramada Midoobay oo doonaysa in xabad joojin laga dhaqan geliyo Suuriya - BBC News Somali
Qaramada Midoobay oo doonaysa in xabad joojin laga dhaqan geliyo Suuriya
24 Febraayo 2018
Waxa ka socda xarunta Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay dedaallo xoogan oo diblomaasiyadeed kuwaas oo lagu doonayo in goluhu ku soo saaro qaraar ku baaqaya in xabad joojin bani'aadanimo laga dhaqan geliyo dalka Suuriya.
Cod bixin loo qaadi lahaa arintan oo muddo saacado ah la hakiyey Khamiistii, ayaa markii dambe gabi ahaanteedba la laalay ka dib markii Ruushku ku gacan saydhay.
Hogaamiyeyaasha Faransiiska iyo Jarmalka ayaa qoraal u diray madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, ay kaga codsanayaan in uu taageero qorshahan, iyada oo ay weli ciidamada dawladda Suuriya duqaynayaan bariga Quuda ee ay falaagadu gacanta ku hayaan.
In ka badan afar boqol iyo lixdan qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay halkaa ilaa maalintii Axaddii. Diyaaradaha qumaatiga u kaca ee milatariga Suuriya ayaa waraaqo ku daadiyey halkaa ay ku qoranyihiin fariimo loogu sheegayo dadka rayidka ah jidad loo calaamadiyey in ay ka baxaan.
Dhanka kalena danjiraha Sweden u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa BBC-da u sheegay in ujeedada ugu wayn ee laga leeyahay xabbad joojintan la doonayaa ay tahay in gargaar la gaadhsiiyo bariga Quuda oo xaaladeeda Xog-hayaha Guud ee Qaramada Midoobay ku tilmaamay in ay tahay "cadaabtii ifka".